သင်၏အကြောင်းအရာပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်ခြင်း | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 6, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်သင်၏ပရိသတ်အတွက်နေ့စဉ်တန်ဖိုးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုထုတ်ပေးသည့်မာရသွန်ဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာစာဖတ်သူများ၊ ပရိသတ်များသို့မဟုတ်နောက်လိုက်များနောက်ဆုံးတွင်ဖောက်သည်များအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သောအခွင့်အာဏာနှင့်အကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်ခဏကြာပါသည်၊ ထို့ကြောင့်ရှေ့တွင်ရှိသောပန်းတိုင်ကိုအာရုံစိုက်ရန်အရေးကြီးသည်။ သင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်နည်းတစ်နည်းမှာအကြောင်းအရာပြက္ခဒိန်ကိုသင်၏အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတွင်းထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာပြက္ခဒိန်သည်သင်၏အကြောင်းအရာများအားမဟာဗျူဟာ၏လိုအပ်ချက်များထက်ရှေ့ဆက်နိုင်ရန်အတွက်အနာဂတ်၌သင်၏ရေးသားချက်များကိုမြင်ယောင်စေသည်။ အကျဉ်းချုပ် မကြာသေးမီကစီမံခန့်ခွဲသူမှခွင့်ပြုရမည့်အကြောင်းအရာများအပါအ ၀ င်အကြောင်းအရာကိုခြုံငုံကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည့်စိတ်ကူးကောင်းသောပြက္ခဒိန်ကိုမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ငါပြီးခဲ့သည့်လကအကြောင်းအရာထုတ်ယူအပေါ်အလွန်အမင်းမအောင်မြင်ခဲ့ကွောငျးသငျသညျမွငျနိုငျ!
ငါနှစ် ဦး စလုံးတစ် ဦး ရှိသည်ကတည်းက အကျဉ်းချုပ် Blog တစ်ခုနှင့် WordPress ဘလော့တစ်ခု၊ မည်သူမဆို WordPress အတွက်အလားတူ feature တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်သိလိုသည်။ အဲဒါပါပဲ WordPress အယ်ဒီတာအဖွဲ့.
WordPress အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကသင့်အားပို့စ်များကိုတင်ရန်နှင့်၎င်းတို့အားဆွဲချရန်ခွင့်ပြုသည်။ တကယ်လို့သင်ဟာတကယ်ကိုလုံ့လဝီရိယရှိတဲ့လူမှုမီဒီယာမန်နေဂျာတစ်ယောက်ဆိုရင်မင်းရဲ့ပြက္ခဒိန်ရက်သတ္တပတ်တွေကိုကြိုတင်ပြီးသင့်ရဲ့အသုံးပြုသူများကိုအကြောင်းအရာတွေကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာများကိုမဟာဗျူဟာ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Tags: အဓိကစျေးကွက်သုတေသနအဓိကသုတေသနsoftware အကြံဥာဏ်
အဆိုပါအကြောင်းအရာ Grid v2
6:2011 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 31
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် wordpress site နှင့်ဤသို့ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းရှာနေသည်။ လမျးခရီးအားဖြင့်လည်းကောင်း website ။